“दिलीप कुमारले संसार छोड्नु,भन्दा एक दिन अघि कसलाई दान दिएका, थिए ९८ करोडको सम्पत्ती ? – Taja Khawar
आइडियाका खानी बालेनको नयाँ योजना सार्वजनिक
“दिलीप कुमारले संसार छोड्नु,भन्दा एक दिन अघि कसलाई दान दिएका, थिए ९८ करोडको सम्पत्ती ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १०, २०७८ समय: ११:२३:०४
“एजेन्सी । युसुफ खान उर्फ बलिउड अभिनेता ​​दिलीप कुमारको बुधवार बिहान ७ जुलाईमा निधन भयो। दिलीप कुमारको निधनमा बलिउड स्टारका साथै देशका ठूला नेताहरूले पनि शोक ब्यक्त गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, राहुल गान्धी, उद्धव ठाकरे जस्ता धेरै राजनीतिज्ञहरूले सायरा बानोलाई सान्त्वना दिए र दिलीप कुमारको निधनमा शोक व्यक्त गरे।”
“दिलीप कुमारको मृत्युले भारतलाई मात्र नभई पाकिस्तानलाई पनि दुख दिएको छ। दिलीप पाकिस्तानको पेशावरमा जन्मेका थिए र उनका पुर्खाहरूको घर आज पनि त्यहाँ छ। उनको मृत्युको शोकमा, पाकिस्तानमा उनका प्रशंसक र आफन्तहरूले उनलाई गबाना नामाज ई जनाजा अर्थात् अन्तिम विदाई दिए।”
“यसै बीच, दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमारको बारेमा धेरै पोष्टहरू सोशल मीडियामा भाइरल भइरहेका छन्। यी पोष्टहरूमा दावी गरिएको छ कि दिलीप कुमारले जिवनभर हिन्दू बनेर अभिनेताका माध्यमवाट करोडौ कमाए । सम्पन्नशाली बने तर जव उनको निधन भयो त्यो भन्दा एक दिन अघि उनले ९८ करोडको सम्पत्ति वक्फ बोर्डलाई दान गरे।”
“यद्यपि जब यो सोशल मीडियामा आएको दावीको अनुसन्धान गरिएको छ । जब अनुसन्धान गरियो यो कुरा गलत सावित भयो । दिलीप कुमारको सोशल मिडिया ह्यान्डलर आसिफ फारुकीले एक निजी मिडिया वेबसाइटलाई भने कि दिलीप कुमारले वक्फ बोर्डलाई ९८ करोडको सम्पत्ति चन्दा दिएको दाबी पूर्णतया गलत छ।”
“उनी भन्छन कि सम्पत्ति वा पैसाको त्यस्तो कुनै अनुदान दिलीप साहेबले वक्फ बोर्डलाई दिएका थिएनन्। त्यहि समयमा मुम्बई वक्फ बोर्डका अधिकारीहरू भन्छन कि दिलीप साहेबले वक्फ बोर्डलाई त्यस्तो कुनै अनुदान दिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा, दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमारले सोशल मीडियामा वक्फ बोर्डलाई पैसा वा सम्पत्ति दान गरेको दाबी पूर्णतया गलत छ। धर्मको लागि इस्लाममा विश्वास गर्ने व्यक्तिले गरेको कुनै पनि प्रकारको अनुदानलाई वक्फ भनिन्छ। यो दान धार्मिक र पवित्र मानिन्छ।”
Last Updated on: July 25th, 2021 at 11:23 am
२७ बर्षिय श्या’म भट्ट बिबाह गरेको दुई महि’नामै अ’स्ताए
२ बालकलाई बचाउन आफ्नै ज्यान दाउमा हाल्ने युवा यिनै हुन्